6 Izinsiza Zezinwele Ezishisayo Nezimfashini Zekwindla/Ubusika 2020 – SL Raw Virgin Hair LLC.
6 Izinsiza Zezinwele Ezishisayo Nezimfashini Zekwindla/Ubusika 2020
Okthoba 05, 2020
Fall 2020 isifikile. Ngakho-ke, uyazi ukuthi sekuyisikhathi sokukhulisa umdlalo wethu wezisekeli zezinwele ukuze uqhubeke ubukeka uyindwangu kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu sinjani.
Phela, ukwenza i-accessorizing kuyingxenye ejabulisayo yokwenza izinwele. Ngakho-ke, ake sinyuse izandiso zezinwele zakho phezulu ngezinye zezitayela ezishisayo ze-Falls zezinsiza zezinwele.
Ngalezi zinsiza, uzobukeka njengomuntu omusha nsuku zonke, futhi izinwele zakho zithole ukubukeka nomuzwa obuyekeziwe.
Izisetshenziswa zethu ze-Fall 6
Ibhande lasekhanda elikhulu kakhulu liku
Kungani ungahluka kuwo wonke umuntu ogqoke ama-wavy amade namagagasi emvelo anebhande lasekhanda elikhulu? Uzoshintsha ngokushesha i-hairstyle yakho yasendaweni enhle ngokungeza lesi siqeshana esisodwa. Thola owodwa kumbala wakho wekwindla owuthandayo futhi uqale ukujabulela isizini.
Ungaphinda ubeke iso ngamabhande asekhanda ahlotshisiwe ukuze uthole insiza ebukeka ihluke kakhulu.
Imicibisholo ihlale iyinhle
Ukunyakazisa i-ponytail ngeqoqo lethu eliqondile noma eli-wavy? Umnsalo omkhulu ongemuva uyisisetshenziswa sezinwele esiphelele salesi sitayela. Elula kodwa ephumelelayo, umnsalo ungafakwa ngokushesha ku-hairstyle yakho. Unganyakazisa umnsalo wakho phakathi kwezinwele zakho noma usondele esisekelweni. Noma iyiphi indlela oyibeka ngayo, umnsalo uzohlala ubukeka muhle.
I-Barrettes iyisengezo esihlale sijabulisa kunoma yisiphi isitayela sezinwele. Kepha ngo-2020, bathathe ubumnandi bakhuphuka kancane ngokuwahlobisa ngamaparele. Ngakho-ke, kungani ungabuyiseli isiqeshana sakho se-SL Raw kinky hair collection nge-pearl barrette oyintandokazi? Uzothola ukubukeka okungaphelelwa isikhathi nokwakudala ngale nsiza yezinwele ebhangqwe nesandiso sezinwele ezisontekile ze-kinky.
Iziqeshana zezinwele ziyabuya
Sika i-weave yakho emuva ukuze uthole isithombe esihle ngemuva kwekhanda lendlebe, eliphinde lisebenze ukuveza iziqeshana zezinwele zakho. Ungangeza okujabulisayo kancane kukho futhi uthole isiqeshana esine-bedazzled esigqama ngempela. Enye yezitayela zekwindla ka-2020 amaparele angama-faux kanye nezinsiza zezinwele ze-diamanté bedazzled. Ngakho-ke, engeza okuthile okuncane kukhanda lakho lezinwele usuku ngalunye ngesiqeshana sezinwele ze-pearl mbumbulu.
Ukukrwelwa kwezinwele kuyisisekelo
Yebo, ukugunda izinwele kwayo yonke imibala nosayizi kuyisisetshenziswa esiwusizo sokubamba futhi ulungise izinwele zakho, ikakhulukazi uma ujahe. Ngemibala eminingi nezitayela ezitholakalayo, ungaba nokubukeka okuhlukile nsuku zonke zeviki futhi ugcine iponytail yakho ilindile lapho umoya uqala phezulu.
Sincoma ukungeza i-scrunchie enkulu noma amabili eqoqweni lakho.
Ibhande lekhanda le-Scrunchie
Lapha sihlanganisa izinto zethu ezimbili esiyintandokazi zibe insiza eyodwa yamaqhawe ekwindla. Ibhande lekhanda le-scrunchie eline-grosgrain elixubile lengeza imininingwane eyengeziwe kumabhande asekhanda alula. Lokhu kumane nje kuyisitayela sezinwele ezinhle ezilungele ukubhangqwa nezandiso zethu zezinwele.
Iyiphi into ozoya kuyo uma usebusika?
Ukuwa kuvame ukuhlotshaniswa nezinwele eziphoqelekile. Kodwa ngalezi zinsiza zezinwele zithatha umdlalo wakho wezinwele uwuyise kwelinye izinga, uzoba nini usuku olubi lwezinwele?
Kunezindlela eziningi zokulungisa izandiso zezinwele ezisontekile zekinky ukuze uthole izinwele zezinwele ezisheshayo nezemfashini zokuwa. Ngakho-ke, ulungele ukukhulisa umdlalo wakho wezinsiza zezinwele? Bamba i-weave oyikhonzile phakathi kwezandiso zezinwele ezingcono kakhulu bese uqala ukufinyelela.
Tags: accessories, beauty trends, bedazzled barrettes, Best hair looks, fall hairstyles, fashion, hair clips, hair ideas, Hair talk, hair trends, head bands, head wraps, headband, instyle, protective styles, scrunchies